एउटा बेग्लै कथा "झम्की दिदी " !
युबराज रेग्मी, प्रकाशित मिति : २०७५ भदौ १९ मंगलबार
गौरादह । केहीदिन अघिसम्म गौरादह नगरपालिका वडा न ९ बैगुन्धुरा वडा कार्यालय परिसर पुग्ने जो कोहिले देखेको दृश्य हो यो । बैगुन्धुरा वरपर घर घरमा पुगेर एक मुठ्ठी चामल माग्दै हिड्ने "झम्की दिदी "आज त्यहा छैनन , बैगुन्धुराका सडकहरु पनि एकाएक सुनसान छन । जहाँ दिनहु जसो एक बेसहरा जीवन डोहोर्याउने 'झम्की दिदि' हिजो आज निकै बिरामी छन् । उनि अस्ति पापी पेट पाल्न घस्रीदै गर्दा अचानक लडिन् । अहिले उनको गोडा कामै नलाग्ने गरि भाचिएको छ ।
बेसहारा झम्की दिदीको घरको छाना आकास थियो, सुत्ने घर यही मर्त्यलोक ! बृद्द शरीर, दिशा पिसाब एकै ठाउँ । अकल्पनीय छ उनको जीवन यात्रा । उनका सन्तान कोहि छैनन् , आफन्त नाता गोता को हो थाहा छैन । कसरी बैगुन्धुरा आइपुग्नु भयो, कसैलाई थाहा छैन । हाम्रो वरिपरि सयौ सहयोगी मनहरु छन् ।
जो यस्ता बेसहारा जीवनका लागि केही सहयोग गरौ भन्ने मन लिएर बसेका छन् । मात्र जानकारी भएको छैन , त्यहि अभियान सफल पार्न गौरादह नगरपालिका वडा न ९ का अध्यक्ष सिताराम भट्टराईले सहजताका लागि सिद्दार्थ बैंक गौरादह साखामा सहयोग रकम राखिदिन अनुरोध गर्दै खाता न :- ००७१५१३५७६६ खोलिदिएका रहेछन् ।
हुनत बैगुन्धुरावासीको लागि झम्की दिदी नौलो नाम होइन । वर्षौ देखि उन बैगुन्धुरामा बस्दै आएकी र धेरै दाताहरूले यथा सक्य सहयोग समेत गरेका रहेछन् ।
झम्की दिदी अहिले घोपा हस्पिटलमा छिन् । सिताराम भट्टराईकै सहयोगमा उनलाई घोपा पुर्याइएको रहेछ । वडाले आर्थिक सहयोगको लागि धेरै ठाउँमा अपिल पनि गरेको रहेछ .....। जानकारी टिपोट गर्दा म स्तब्द भए जव झम्की दिदीले जीवनमा पाएको दुखको बारेमा बर्णन गर्दै जादा सिताराम दाइको गला अबरुद्ध भयो ....
यो_सत्य_कथा हो । हाम्रो देशमा हजारौं झम्कीदिदी हरु बेसहारा छन् । यो देशमा लोकतन्त्र आएको छ, तर झम्की दिदीहरु जस्ता भाग्य खोसिएका नारीहरु लाई लोकतन्त्र संग कुनै लेनादेना छैन। झम्कीदिदी लाई अलिकति उपचार खर्च र एउटा सहयोगी संस्थाको सहयोग चाहिएको छ ।
यदि तपाईंलाई यो कथाले हृदयमा छोयो भनें सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ । पुन्य पाउन मन्दिर धाउनु पर्दैन यहाँ दर्जनौ आत्मा हरुलाई पुजा गर्न सकिन्छ । कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो , झम्की दिदी लाई सहयोग गरि त्यही इश्वर पाउने हो ,त्यहि इश्वर पाउने हो ।